अर्थ Archives - Page2of 55 - Tudikhel - Nepal's Popular Digital NewsPaper
राजश्व चुहावट गरेको अभियोग ७७ करोड बिगो दाबीसहित मुद्दा
काठमाडौं, २४ असार । भन्सार चोरी पैठारी, झुठा तथा नक्कली मूल्य अभिवृद्धिकर विजक प्रयोग गरी राजश्व चुहावट गरेको अभियोगमा विभिन्न व्यक्ति तथा कम्पनीविरुद्ध ७७ करोड चार लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ । उनीहरुविरुद्ध बिगो असुल गरी सोहीबराबरको जरिवाना र कैद सजायको माग दाबीसहित राजश्व अनुसन्धान विभागले बुधवार उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा चलाएको हो । झुठा तथा नक्कली मूल्य अभिव...
आज पनि बढ्यो सुनको मुल्य, कति पुग्यो ?
काठमाडौं, २४ असार । मंगलबारको तुलनामा सोमबार छापावाला सुनको मुल्य ६ सयले बढेको छ । मंगलबार नेपाली बजारमा सुनको मुल्य ९० हजार ९ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । बुधबार मुल्य बढेर ९१ हजार ५ सय पुगेको छ । तेजावी सुनको मुल्य भने ९१ हजार ६० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । ...
सुनको मुल्य बढेको बढ्यै, कति पुग्यो ?
काठमाडौं । मंगलबारको तुलनामा नेपालमा सुनको मुल्य ७ सय रुपैँयाले बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघकाअनुसार सोमबार तोलामा ९० हजार ७ सय भएको हो । मंगलबार सुनको मुल्य ९० हजार २ सयमा कारोबार भएको थियो । यस्तै सोमबार तेजावी सुन तोलामा ९० हजार ४६० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । ...
बैंकिङ कसूरका फरार दुई अभियुक्त पक्राउ
काठमाडौं २२, असार । बैंकिङ कसूरमा फरार रहेका दुइजना अभियुक्तलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट खटिएको प्रहरी टोलीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा काठमाडौं महानगरपालिका–१६ नयाँबजारका ५५ वर्षीय राजमान सुनार र तारकेश्वर नगरपालिका–१५ ठेगाना भएका ४१ वर्षीय विश्वमर्दन बस्नेत रहेका छन्। प्रहरीले सुनारलाई काठमाडौंको तारकेश्वर र बस्नेतलाई काठमाडौंको धर्मस्थलीबाट पक्राउ गरेको हो...
राष्ट्र बैंकले ल्यायो ५० को नयाँ नोट चलनचल्तिमा
काठमाडौं २२, असार । नेपाल राष्ट्र बैंकले ५० रूपैयाँको नयाँ नोट चलनचल्तीमा ल्याएकाे छ। आज (सोमबार) देखि राष्ट्र बैंकले बायाँतर्फको अग्रभागमा सगरमाथाको चित्र र दायाँतर्फ लालीगुराँसको पानी छाप भएको उक्त नोट चलनचल्तीमा ल्याएको हो। साविककै आकार, प्रकार र रंगमा सङ्केत नम्बर भने ज–८९०००००१ देखि ट–३३९९९९९९ रहेको छ। नोटमा ‘नेपाल सरकारको जमानत प्राप्त यसको भुक्तानी मागन आएमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट...
साढे ७४ हजारसहित ५ जना तासको खालबाटै पक्राउ
काठमाडौं १९, असार । मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका–७ नागसोती चौकबाट जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा ७४ हजार ६८५ रूपैयाँ र दुई बुक ताससहित ५ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा हेटौडा उपमहानगरपालिका–७ नागसोतीका ५७ वर्षीय सुदर्शन फुयाँल, ३७ वर्षीय उद्धब खुलाल, ४१ वर्षीय दिनेश गौतम, ३५ वर्षीय विकास गौतम र २८ वर्षीय पूर्णराज थिङ रहेका छन्। उक्त स्थानमा जुवातास खेलिरहेको भन्ने सू...
बैंकिङ कसूरमा फरार दुई अभियुक्त पक्राउ
काठमाडौं १९, असार । बैंकिङ कसूर मुद्दामा फरार रहेका २ जना प्रतिवादीलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट खटिएको प्रहरी टोलीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा भक्तपुर मध्यपुर ठिमी नगरपालिका–७ बस्ने ४४ वर्षीय राम ज्यापु र काठमाडौं बुढानिलकण्ठ नगरपालिका–११ पैयुँटार बस्ने ४४ वर्षीय प्रकाश बुढाथोकी रहेका छन्। पक्राउ परेकामध्ये ज्यापुलाई उच्च अदालत पाटनको २०७६ भदौ २ गतेको फैसलाले बैंकिङ कसूर मु...
स्रोत नखुलेको १० लाख रूपैयाँसहित युवक पक्राउ
काठमाडौं १८, असार । रौतहटको गौर नगरपालिका–२ महादेवपट्टीबाट स्रोत नखुलेको नेपाली १० लाख रूपैयाँसहित एक युवकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा सोही ठाउँका २३ वर्षीय अभिनाश जैसवाल रहेका छन्। गएराति उनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट र २ नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरबाट खटिएको प्रहरीको संयुक्त टोलीले पक्राउ गरेको हो। भारतबाट नेपालतर्फ आउँदै गरेको बीआर ३० यु २५३३ नम्बरको मोटरस...
सुनको भाउ प्रतितोला ९१ हजार ७०० पुग्यो
काठमाडौं १७, असार । सुनको भाउ लगातार उकालो लागेको छ। बुधबार छापावाल सुन प्रतितोला ५०० रूपैयाँले बढेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघले प्रतितोला छापावाल सुन ९१ हजार ७०० रूपैयाँमा कारोबार भइरहेको जनाएको छ। तेजावी सुन पनि बढेर ९१ हजार २६५ रूपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। चाँदीको भाउ पनि तोलामा १५ रूपैयाँले बढेको छ। यसरी बढ्दा चाँदी प्रतितोला बुधबार ९६० रूपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जन...
६५ लाख ८ हजारसहित २ जना पक्राउ
काठमाडौं १६, असार । ६५ लाख ८ हजार रूपैयाँको स्रोत नखुलेपछि प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा काठमाडौं महानगरपालिका–१४ कुलेश्वरबाट बाराको जीतपुर घर भएका ४७ वर्षीय रमेश सिंह र काठमाडौं कुलेश्वर बस्ने भारत घर भएका २५ वर्षीय रवि शंकर सिंह रहेका छन्। अवैध रूपमा नगद कारोबार गर्ने गरेको भन्ने सूचनाको आधारमा महानगरीय प्रहरी वृत्त कालिमाटीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले उनीहरूलाई उक...